အမျိုးအစား: Appetizer နှင့်ဟင်းရွက်သုတ်
သင်၏လူကိုဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ ရက်တွင်နှစ်သက်ပါ။ - ဂန္တ ၀ င်ဒိန်ခဲ၊ ကြက်သွန်ဖြူနှင့်ခရမ်းချဉ်သီးများကိုပေါင်းစပ်ခြင်းသည်လူတိုင်းကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်။ အာလူးပိုင်ပန်းကန်၏ကြည်လင်ပြတ်သားသောအခြေနေသည်အစားကောင်းကြိုက်သူများအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်လာလိမ့်မည်။
အတူသို့မဟုတ်မရှိဘဲအလွန်ဘုံဖြစ်ပါသည်သင်ဤသုပ် "သံတမန်" ပြင်ဆင်မည်မည်, ထပ်ကြိုးစားပါ။ အထဲကအရသာသင့်အိမ်ထောင်စုအတွက်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုအရှိဆုံးရိုးရှင်းပြီးတတ်နိုင်ထုတ်ကုန်ကနေအစားအစာ, နှင့် ...
ကီဝီ, ပန်းသီးနှင့် sprats - သငျ, ဖြစ်ကောင်း, အသားညှပ်ပေါင်မုစာရွက်ထိုသို့သောပေါင်းစပ်အံ့သြသွားရလိမ့်မည်။ သို့သော်ပါဝင်ပစ္စည်းများမယုံနိုင်လောက်အောင်အရသာရှိတဲ့နှင့်အတူစိတ်ချစွာ, ပွဲလမ်းသဘင်အသားညှပ်ပေါင်ငြိမ်ဝပ်စွာနေ။ ဟုတ်ပါတယ်, သူတို့တစ်တွေ zest ရှိသည်, သို့သော်မ ...
သင်ကဧည့်သည်များအံ့သြခြင်းနှင့်စိတ်တော်ကိုအဘယ်သို့မသိကြသလော အဘယျသို့လိပ်ချက်ပြုတ်ဖို့? သင်ကနေရောင်စုံနှင့်အရသာရှိတဲ့မုန်ကွိုတငျပွငျဆငျလျှင်ရုရှား herring ကောင်းစွာ, နှစ်သစ်ကူးရဲ့ table ၏မိဖုရားဖြစ်လာပေမည်။ ရှုပ်ထွေးဘယ်အရာကမှ, သင် ...
ခရစ်စမတ်အဘို့ဆောင်သောပွဲတစ်သုပ်နဲ့အတူစတင်ခဲ့သည်။ ဤအချိန်သူတို့စားပွဲပေါ်တတ်နိုင်သမျှပါလိမ့်မည်ကြပါစို့။ ရိုးရာနှစ်သစ်ကူး Olivier ထမင်းချက်နှင့်အခြားသူများအပြင်၌။ တချို့ကငါးဖြစ်ဖို့ရှိသည်သို့မဟုတ် ...
အလေးချိန်, ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးတော့အဝလွန်မဟုတ်ဆုံးရှုံးဖို့စားရန်ရှိကဘာလဲ? တစ်ဦးအသွင်သဏ္ဌာန်ပုံများအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြသည်သောသူတို့၏အမျိုးအထာပြဿနာ။ ကံကောင်းထောက်မစွာအားလုံး Dieter အဘို့, အနိမ့်ကယ်လိုရီများများ, ဒါပေမယ့်အာဟာရရှိပါတယ် ...
Mayonnaise ဖြည့်စွက်ခြင်းမရှိဘဲတစ်အရသာရှိတဲ့သုပ်ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? လူတွေအများအပြားသုပ်များအတွက်အသင့်တော်ဆုံးထုတ်ကုန်ဖြစ်သောကြောင့်, ကမဖြစ်နိုင်ဘူး, ဒီမေးခွန်းကိုဖြေပါလိမ့်မယ် - တဲ့ Mayonnaise, ကရိုးရိုးအစားထိုးလို့မရတဲ့ဖြစ်ပါတယ် ....
Ratatouille (Scope - Provence, Cote d'Azur) ရတ္တူးလ်အတွက်ပြင်ဆင်ချိန် - ၃၀ မိနစ်။ ချက်ပြုတ်ချိန် - ၄၅ မိနစ်။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ (ခြောက်ယောက်အတွက်): ခရမ်းချဉ်သီး - 30g ။ Zucchini - 45 ဂရမ်။ သံလွင်ဆီ -
သုပ်အတွက်မုန်လာဥနီဘယ်လောက်ချက်ရမလဲ။ ဓားဖြင့်ထိုးဖောက် .... အကယ်၍ ၎င်းသည်အလွယ်တကူအသင့်ပြင်ဆင်နိုင်လျှင်ချက်ပြုတ်ရန်ခက်ခဲသည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်သည်မိုက်ကရိုဝေ့တွင်7မိနစ်ကြာပါဝါအပြည့် သုံး၍ ချက်ပြုတ်လျှင်ကြာကြာဓားဖြင့်ထိုးဖောက်ရန်လိုအပ်သည်။ ပျော့ပျောင်းပါကအဆင်သင့်ဖြစ်ပါစေ။
မည်သည့်ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သည့်လတွင် caviar နီသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သနည်း။ တကယ်တော့အနီရောင် caviar, သင်ဤကာလအတွင်းကတည်းက, စက်တင်ဘာလ, စက်တင်ဘာလအပေါ်ကျသောသူ၏ထုတ်လုပ်မှုရက်စွဲတစ်ခုဝယ်ယူရန် ...
ဘယ်လိုစိုစွတ်သောပန်းသီး? ဆားရည်အိုင်: 102stack သကြားသို့မဟုတ် MDA မှာဌရေ,3tbsp ဆား, 200 ဂရမ်ကောက်မုန့်ညက်။ အနာစိမ်းများနှင့်ပန်းသီးကောက်ရိုး shift ရန်, ရေထဲသို့မုန့်ညက်နှိုးဆော်။ ...
အဘယ်အရာကိုညစာအဘို့ချစ်ရာသခင်သည်အရသာချက်ပြုတ်ဖို့? ကြည့်ရှုကွဲပြားခြားနားသောဟင်းလျာများအများကြီးတစ်ခုခုသင်နှင့်နေရာလေးကိုအတွက်လာကြလိမ့်မည်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှိပါတယ်: http://otvet.mail.ru/answer/299656874/ http://otvet.mail.ru/answer/302286852/ ကို http: // otvet ။ mail.ru/answer/296537452/ http://otvet.mail.ru/answer/296535133/ ပြင်သစ် 1 အတွက်အာလူးနဲ့အသားဝက်သားသို့မဟုတ်အမဲသားကီလိုဂရမ် ...
vinegreda များအတွက်အာလူး, မုန်လာဥ, beets ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? နူးညံ့သောအထိပါပဲ။ ပျော့ဖြစ်လာစေရန်။ )) beet နှင့်မုန်လာဥအတူတကွချက်ပြုတ်) တကယ်ဘာသာရပ်အပေါ်အဘယ်သူမျှမစိတ်ကူးများရှိပါတယ်သည်ဟုယုံကြည်ကြဘူး, တစ်ခုခုနှင့်အတူကပ်ရန်ကြိုးစားပါ။ သီးခြားစီအာလူး ... ။
ဘယ်လိုအသုံးဝင်ပင်လယ်ရေညှိ? ပင်လယ်ရေညှိစားပင်လယ်ရေညှိ၏အသုံးဝင်သောဂုဏ်သတ္တိများ radionuclides, အဆိပ်, လေးလံသောဒြပ်စင်၏မစင်ကိုအားပေးအားမြှောက်; သွေးလက်စထရောအဆင့်ကိုလျှော့ချ, သွေးခဲကိုထိန်းညှိ ...
အာလူးကြော်နဲ့တူ crunched သောကြက်သွန်ကြော်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? နက်-ကြော်အတွင်းရှင်းလင်းချက်! FRITYuREIngredienty ကြက်သွန်နီလက်စွပ်: အဘိတ်မြည်းစမ်းဖို့ 150 ဂရမ်ကြက်သွန်နီ luka1 /4ခွက်ကိုဂျုံ mukisol: ကြက်သွန်နီ, သန့်စင်ဆေးနှင့်အထုကုန်တယ် ...
ရေနှင့်ဂျုံမှုန့်မှမုန့်စိမ်းပြုလုပ်နိုင်သလော။ ဆားထည့်ရန်မမေ့နိုင်ပါ။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာခေါက်ဆွဲဖြင့်သွားမည်ဖြစ်သော်လည်းကြက်ဥနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော))) ၎င်းသည်ဥမပါဘဲမဖြစ်နိုင်ပါ။
အဘယ်အရာကိုစမုန်နက်မှအဘယ်သို့ပြင်ဆင်နိုင်သနည်း စမုန်နက် casserole - စမုန်နက် - 500 ဂ - ခရမ်းချဉ်သီး (ကြီးမား) -3PCs ။ - ကြက်သွန်နီ - 1 pc ။ - ဘေကွန် - 50 ဂ - မာဂျ - -
prompt ကိုသုပ်အမဲသားအသားနှင့်မှိုသုပ် shampinonami250 ပါ g မှိုနှင့်အတူ, 300 ဆနွားငယ်သား, 1 မီးသီး, 1 အနုပညာ။ l ။ သံပုရာဖျော်ရည်ကို, ငရုတ်ကောင်း, ဆား။ ချပ်သို့ဖြတ်ကိုပြင်ဆင်မှိုထွက်ထားလေ၏။ ...
အိမ်တွင် Cremette ဒိန်ခဲကိုမည်သို့ချက်ပြုတ်ရမည်နည်း။ Philadelphia တွင်ဒိန်ခဲပြုလုပ်နည်းကိုအင်တာနက်ရှာဖွေပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပြောနိုင်တာကသဘာဝမုန့်ရှာရတာအဓိကအခက်အခဲကမလွန်ကဲပါဘူး။ ကောင်းပြီ ...
ဘယ်လိုချက်ပြုတ်ရန်ကြက်သားအသည်းနှင့်မုန်လာဥနီနှင့်အတူသုပ်? အိုးတလုံးထဲသို့သွင်းထားကိုဆေးကြောကြက်သားအသည်းနှင့်အသည်းမုန်လာဥမှသုပ်, ရေအေးလောင်း, အဆင်သင့်သည်အထိအလယ်အလတ်အပူမှာပေါင်း, ဆားထည့်ပြီးပါပြီ ...
14 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,447 စက္ကန့်ကျော် Generate ။